Maitiro ekugadzira boka revanosangana pane iyo iPhone | IPhone nhau
Pane zvinhu nezve Apple izvo zvisinganzwisisike. Vanonetseka nezvekuita zvishoma zvakapusa zvinhu, dzimwe nguva zvakawandisa, uye vanokanganwa kuwedzera zvimwe zvekutanga sarudzo. Imwe yesarudzo dzakakosha ndeye maitiro ekugadzira boka revanosangana pa iPhone. Iyo agenda yeIOS yakanyatso kukwana uye mairi tinogona kuwedzera mapikicha, mawebhu kero, maemail, vanhu vane hukama uye kunyangwe nhoroondo dzemagariro, asi zvakadii nemapoka? Chii chatinoita kana tichida kugadzira boka reshamwari, mhuri kana chero rudzi rweboka kubva kune iPhone?
Zvakanaka, nemaapplication atinayo nekutadza isu hatizokwanise. Iye zvino tava kukwanisa kudzosa iyo iPhone, tinya uye bata pane vanobatana, mapoka, bvunza Siri kana chero chatinofungidzira, hapazove nenzira yekuita boka. Neraki, ivo vanogadzira vanokwira kumusoro mafomu zvemarudzi ese kuApp Store, saka isu tichafanira chete kutsvaga yatinoda (pamwe nekusecha kwakadai se "vanobata", "mapoka" kana zvimwewo). Ndiri kuenda kunokurudzira matatu ane yemahara vhezheni uye izvo zvinotibvumidza isu kugadzira uye kubata vanofambidzana nekuona yekushambadzira banner.
1 Maitiro ekugadzira boka revanosangana pane iyo iPhone
1.1 Nyore Nyore
Ichokwadi ndechekuti idzi mhando dzekushandisa dzakanyatsojeka. Ivo vakaita kunge ajenda yechero smartphone, asi yega yega application ine yayo interface. Tichaita zvinotevera:
Takatamba pa Makira.
Takatamba mu pamwe nechiratidzo (+).
Isu tinosuma iyo Nombre yeboka.
Takatamba pa Zvadaro.
Isu tinosarudza vanofambidzana iyo yatinoda kuisa muboka idzva.
Kune matani ekushandisa muApp Store izvo zvinotibvumidza isu kuti tigadzire mapoka ekubatana pane iyo iPhone, asi Simpler Maficha anoita kunge ari nyore kwandiri. Dzimwe sarudzo dzinogona kufarira iwe ZXContact o Kubatana. Kana, sezvandakaita, une Mac uye kunyangwe isina chekuita nekuvagadzira kubva ku iPhone, chakanakisa ndechekuti iwe ugadzire mapoka ekubatana neiyo OS X Contacts application.Uye kana zvisiri, unogona kugara gadzira iro boka kubva kuICloud.com.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzira boka revanosangana pane iyo iPhone
Ehe hongu, zvinosuwisa kuti kubva ku iPhone haugone kudzora mapoka nechisimba chikumbiro, ini ndakakwanisa kuronga ajenda pakutanga nekuda kweICloud.com uye kunyanya kune aContact + application, yakakosha kwandiri kwemakore.
Izvo zvakare zvinokwanisika kugadzira mapoka ekubatana kubva icloud.com uye kana iwe ukaisa ako ekutaurirana kuti aenderane neicloud ipapo akagadzirwa mapoka uye vanobatika vanoonekwa mune ajenda
Zvatichaona pachiitiko cheApple munaGunyana 9